नेकपाका सांसदले पार्टीमा छलफल नभएको रिस संसदमा पोखे – Dullu Khabar
नेकपाका सांसदले पार्टीमा छलफल नभएको रिस संसदमा पोखे
काठमाडाैं । पार्टीमा छलफलै नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारीमा लागेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका केही सांसद सरकारविरुद्ध संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्तमाथिको सोमबारको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । खासगरी नेकपा स्थायी समिति बैठक राख्ने कि नराख्नेसम्बन्धी पार्टीभित्रको विवादको प्रतिबिम्ब सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा देखिएको हो ।
नेकपाका सांसद डा. बेदुराम भुसालले सत्तारुढ पार्टीले नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफलै नगरी ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘बजेट ल्याउने तयारीबारे पार्टीहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुपर्थ्याे, अझ सत्तारुढ पार्टीमा त छलफलै नगर्ने तरिका घोर अलोकतान्त्रिक छ, त्यसैले यस्तो कुरालाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ? भुसालले प्रश्न गरे ।
नेकपाकै अर्का सांसद पर्शुमेघी गुरुङले पनि भुसालकै जस्तो धारणा आइतबारको बैठकमा राखेका थिए । ‘पार्टीहरूभित्र छलफलै नगरी बजेटको तयारी गर्ने तरिका अलोकतान्त्रिक छ,’ उनले भनेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महामारीको यो अवस्थामा पार्टीहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्ने कुरा व्यावहारिक हिसाबले सम्भव नहुने जवाफ दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे मन्तव्य राख्ने क्रममा सबै प्रकारका असमानताहरू अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
यसमा पनि भुसालले आपत्ति जनाए । समाजवाद आउनुअघि सबै असमानता मेट्ने कुरै सैद्धान्तिक हिसाबले गलत भएको भन्दै भुसालले विमति राखे, ‘अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार समाजवाद आउनु पहिल्यै सबैखाले असमानता मेटिन्छ भन्ने आयो । यो कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले नै गलत छ ।’
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने पार्टीकै सिद्धान्तलाई पछ्याएर बजेटको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे ।
सांसदहरूले पार्टी बैठक नराखिएको विषय उठाए पनि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संसद्का बैठकहरूमा पार्टीको आन्तरिक विषय उठाउन नदिने र असहमतिका बाछिटा प्रतिबिम्बित हुन नदिने सहमति भइसकेको छ ।
त्यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले संसदभित्र एकताबद्ध भएर समान धाराणासहित प्रस्तुत हुन सबै सांसदहरूलाई पत्रमार्फत लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
पार्टी स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका भुसालसहित २० स्थायी समितिका नेताहरूले नेकपाभित्र बैठक माग गर्दै आएका छन् । तर, बैठक कम्तीमा २ जेठयता नबस्ने निश्चित भएको छ । २ जेठमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र स्थायी समिति बैठक बजेटअघि राख्ने कि नराख्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पछिल्लोपटक समझदारी भएको छ ।